Punch Line – MMANIME
Created byYutaka Uemura
StarringAkinori Nagaoka, Arisa Date, Atsushi Sasaki, Daisuke Takahashi, Haruka Tomatsu, Haruo Yamagishi, Hiroki Goto, Hyang-Ri Kim, Isamu Yūsen, Issei Maeda, Jin Urayama, Jun Oosuka, Katsuhiko Sasaki, Kenji Akabane, Kentaro Ito, Marika Minase, Mariko Honda, Marina Inoue, Mariya Yamada, Minako Kotobuki, Noriko Ueda, Rie Kugimiya, Riki Kagami, Sora Amamiya, Tadashi Mutou, Takashi Aoki, Takehiro Hasu, Takuya Masumoto, Tetsujin Aoki, Wataru Komada, Youji Ueda, Yū Seki, Yui Shoji, Yuri Yoshida, Yūta Odagaki, Yutaka Sasakura
Synopsis of Punch Line
Punch Line [အတွင်းခံသူရဲကောင်းလေး]
English Name – Punch Line
Japanese – パンチライン
Myanmar Name – အတွင်းခံသူရဲကောင်းလေး
Status – ပြသခြင်းပြီးဆုံး
ပြသခဲ့သည့်ရက်ဆွဲ – ဧပရယ်လ ၁၀ရက်, ၂၀၁၅ ခုနစ် မှ ဂျန်နဝါရီလ ၂၆ရက်, ၂၀၁၅ထိ
Premiered – Spring 2015
Producers – Aniplex, Dentsu, Fuji TV, MAGES., Kyoraku Industrial Holdings, Kansai Telecasting
Licensors – Sentai Filmworks
Genres – Comedy, Ecchi, Sci-Fi, Super Power, Supernatural
Rating – Teens 13 or older
ကဲ!? ကဲ!? Ataki The Heat ပါခင်ညာ!!!
Princess Lover ကလည်း တစ်ဝက်လောက် ပြီးနေပြီဆိုတော့ Project အသစ် မိတ်ဆက်ရတော့မှာပေါ့ :3
ဒီတစ်ခါ Project ကတော့ အနည်းငယ် ထူးခြားတယ်ခင်ဗျ သူက Ecchi အကြမ်းစားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ စွမ်းတွေတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလှပါတယ်
ဇာတ်ကောင်လေးတွေက ဆွဲထားတာ Loli(ကလေး) ဆန်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းက လေးနက်ပါတယ်…
သူ့ဇာတ်လမ်းက ပြောချင်တဲ့ ကိစ္စကို နောက်ဆုံးမှ ပြောသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့…
ပထမပိုင်းတွေကတော့ Kekkai SenSen And Beyond ဆန်ပါတယ် ရှုတ်ထွေးတယ်
ဆန်းကြယ်တယ် မထင်မှတ်ထားတာတွေ ရုတ်တရက်ဖြစ်လာ သလိုပေါ့…
Ending ကတော့တကယ်ကြွေတာ အမှန်ဘဲ
Ed Kara ကတော့ ကို Hybird21 အစွမ်းပါ <3
စကားနည်းနည်း များသွားပြီ Review စကြတာပေါ့…
ကြိုပြောထားမည် Series ထဲမှ Mikatan Narugino (Strange Juice) Iz Mine ပါ :3လုံးဝမပေးဘူး ရှိတာမှ Leviathan, Rem နဲ့ Mikatan လေး (၃) ယောက်တည်းရှိတာ -_-
သူများတွေလို 02 တို့ Ichigo တို့ မပါဘူး Cuz I’m No Poppin :3
စကားကြောရှည်သွားပြီ Review ဖတ်ပါလော့ (ပုံအောက်ဝင် ရှိသည်)
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အစလေးက နည်းနည်းတော့ရှုတ်ထွေးတယ် ဗျ
တိုကျိုမြို့ရဲ ကားလမ်း တစ်နေရာမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံမှုကနေ စ တယ် ဆိုကြပါတော့ xD
အဲ့လိုပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ကားပေါ်မှာ Mc(မင်းသား)(Naruto အသံသရုပ်ဆောင်)
Yuuta Iridatsu ဆိုတဲ့ကောင်းလေးက ပါလာပါတယ် အဲ့လိုနဲ့ဘဲ Hero Will Save The Day ဆိုတဲ့ အတိုင်း Strange Juice(Heat ရဲ့ Waifu) ဆိုတဲ့ Hero မလေးပေါ်လာပြီး ဘတ်စ်ကားကို ပြန်ပေးဆွဲတဲ့လူတွေကို အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ် xD(ချစ်ထှာ)
အဲ့လိုနဲ့ဘဲ အဓိက ရန်သူကြီးကလည် ဘတ်စ် ကားပေါ်မှာပါလာတယ် -_-
မင်းသားက အဲ့ရန်သူကြီးကို သူရဲ့ စွမ်းအင်တွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ ပင်လယ် ထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ် :'(
အဲ့လိုနဲ့ဘဲ မင်းသားရဲ့ ဝိဉာဏ်ကို ကန်ထုတ်ပြီး မင်းသားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပါတယ် T-T
အဲ့မှာ မင်းသားက အထန်ကြောင်တစ်ကောင်နဲ့တွေ့ပြီး သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုရအောင်ယူမှာလဲ သူသရဲဖြစ်နေပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုတွေထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ တော့ Punch Line ခေါ် အတွင်းခံသူရဲကောင်း ဆိုတဲ့ Anime လေးထဲကြည့်လိုက်ပါနော် <3
Strange Juice မပေးဘူး `^´ ကျန်တာအကုန်ယူသွား
Episode 07:DDLEpisode 08:DDL
Firt air date2015-04-10
Last air date2015-06-26
Home PagePunch Line
Nyaruko: Crawling With Love! S2
[Hentai] Genkaku Cool na Sensei ga Aheboteochi!